Ciidamada Itoobiya oo fal aad u xun ka gaystay deegaanka warshaddii hore ee Caanaha
Wararkii: July 25, 2007
Qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay Muqdisho
Saalax Badbaado �Nin Nambar Afar iyo Kaaraan aan dhex dhexaad ka aheyn sidee buu Soomaali isugu keeni karaa ��
Hay�adda Manhal oo deeq raashin gaarsiisay dad ku jira Xerada Carbiska ee deegaanka Afgooye
Dowladda Talyaaniga oo Baydhabo ka soo dejisay deeq ay ugu talagashay in dadka dagaalada ka Barakacay
Banaanbax lagu taageerayey shirka dib u heshiisiinta qaran ee Muqdisho ka soconaya oo ka dhacay Muqdisho
Xubnihii ugu horeeyey Gudiga isku Xirka Haweenka Soomaaliyeed oo lagu doortey Magaalada baydhabo
Ciidamada Dowladda Itoobiya ee ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa iyaga oo lugeynaya kuna hubeysan qoryo culus waxay soo gaareen guri ku yaala Warshadda Caanaha ee Degmada Hodan, waxaana xiligaasi hor kacayey Wiil Dhallinyaro ah oo indha ka xirnaa, kaas oo geeyey Guriga ay ciidamada Itoobiya falka xun ka sameeyeen.
Ciidamada ayaa markii ay guriga tageen waxay ugu tageen labo dhallinyaro ah oo la sheegay in ay ka mid ahaayeen Maxaakiimtii Islaamiga, markii labada nin gacanta ku dhigeen ayay gurigii dab qabadsiiyeen, iyagoo meel isugu keenay kitaabadii ay akhrisan jireen labada dhallinyarada ah, waxaana falkaasi si aad ah uga carooday dadkii deegaanka, kuna tilmaamay fal aad u fool xun.
Ciidamada Itoobiya ayaa labadii dhallinyaro horey u watay, ilaa iyo haddana lama garanayo meel ay la aadeen.
Bishii Juun ayay ahayd markii Ciidamada Itoobiya ee ku sugan agagaarka Kulliyaddii hore Jaale Siyaad ay halkaasi ku dileen saddex wiil oo Walaalo ah, sidoo kale Ciidamada Itoobiya ayaa Isbitaalka Shifa kala baxay dhowr qof oo dhaawac ahaa, kuwaas oo lagu tuhmayey in ay la shaqeeynayeen maamulkii Maxaakiimta Islaamiga, hase yeehsee wareegto uu dhawaan soo saaray Madaxweyne C/llalhi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu ku cafiyey dhamaan dadkii la shaqeynayey ama taageersanaa Maxaakiimta, lama ganaranayo sababaha ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda u ugaarsanayaan ama u dhibaateynayaan dadkii taageersanaa Maxaakiimta Islaamiga ah.
Qaraxyo ay dad ku dhinteen ayaa shalay ka dhacay Magalada Muqdiso, waxa uuna qarixii ugu weynaa ka dhcay agagaarka Baar-ubax, waxaana ku dhintay saddex qofood oo saddexduba ahaayeen kuwo rayid ah oo ay ku jirto Haweenay Uur eh, sidoo kale fiidnimadii xalay ayaa waxaa qarax lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamada Dowladda oo marayay Kaasa-balbalaare, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo afar Askari, hase yeeshee rasaas ay fureen ciidamada Dowladda ayaa waxaa la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah iyagoo marayey wadada.
Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya qaraxyada iyo dilalka loo gaysanayo ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya.
Siyaasiga caanka ah Saalax Nuux Badbaado oo horey xildhibaan uga ahaa Dowladdii Carta ayaa si kulul u beeniyey qoraal sheegayey in lagu daray liiska Ergada gobalada Waqooyi ee Beesha Isaaq kaga qaybgalay shirka dib u heshisiinta Beelaha Soomaaliyeed ee haatan ka socda Magaalada Muqdisho. �Liiskaas waan arkay mana garanayo cid igu darsatay, waxaana ummadda u sheegayaa in aan ka qaybgelin shirkaasi oo ah mid aan ummadda Soomaaliyeed isku keeneen� ayuu yiri Saalax Badbaado oo intaa raaciyey �Shirka haddii uu yahay shir beeleed, maxay u hogaamin waayeen odoyaasha dhaqanka ee laga yaqaano geyigeena, waan tan ay hogaaminayaan Siyaasiyin uu hormuud u yahay Cali Mahdi Max�ed�.
Saalax Badbaado waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay shir aan wax natiijo ahi ka soo bixi dooni, dadka hogaaminayana ay yihiin dad aan isku keeni Karin bulshada Soomaaliyeed. Mar uu la hadlayey dadka reer Waqooyiga, waxa uu yiri �Anaga ayaa haatan ka soo soconaya Muqdisho iyo xaalkeeda ee ha adinku ha isku imaanina�, Saalax Badaado waxa uu intaasi ku sii daray �Aniga kama soo horjeedi midnimada Ummadda Soomaaliyeed, waxaana jeclahay in ay midoobaan Koonfur iyo Waqooyi, waxaanse aad uga xumahay waxa ka taagan Koofurta Soomaaliya�, waxa uuna intaasi sii daba dhigay �nin u hiilinaya Nambar Afar iyo Kaaraan miyaad Soomaali isku keenaya�.
Siyaasiyiin fara badan ayaa durbaba mucaaraday shirka dib u heshisiinta Beelaha Soomaaliyeed ee haatan Muqdisho ka socda ee galay maalintii shanaad, iyadoo haatan Beelaha ay ka wada hadlayaan sidii ay u xalili lahaayeen wixii khilaafaad ah ee horey u dhex maray.
Waxaa maalintii shalay ahayd deeq raashin la gaarsiyey dadka soo barakacay ee ku jira xerada Carbiska ee Deegaanka Afgooye, waxaana deeqdasi isku soo uruuriyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Washington, waxaana qaybinteeda loo xilsaaray Hay�adda Manhal Al-Kheyriya.
Diyaarado siday deeq oo laga leeyahay Dowladda Talyaaniga ayaa shalay ka soo degay garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baydhabo.
Deeqdaas oo isugu jiray Raashin, Teendhooyin Bustayaal Bacaha laga galo Roobka iyo daawooyin ayay Dowladda Talyaaniga ugu talagashay in loo qaybiyo dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay dagaalada.
Deeqdaan ayaa waxaa guddoomay maamulka Gobalka Bay, waxa uuna uga mahadceliyey Dowladda Talyaaniga sida ay mar kasta u garab taagan shacabka Soomaaliyeed.
Deeqdaan waxay ka mid tahay Deeqo Dowladda Talyaaniga ugu talagashay shacabka Soomaaliyeed ee dagaalado aafeeyeen, waxaana la filayaa maalmaha soo socda in Baydhabo ay soo gaaraan diyaarado sida deeqo kala duwan.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay Dowladda Talyaaniga deeqo soo gaarsiiso shacabka Soomaaliyeed.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa gaaray dad fara badan oo ka barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay Magaalada Muqdisho kuwaas oo ku dhibaateysan Magaalada Baydhabo, waxaana la filayaa in maamulka gobalka Bay uu si deg deg ah u qaybiyo deeqdaasi.
Maalintii shalay ahayd ayaa Garoona Banadir Statdium waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayo shirka dib u heshisiinta Muqdisho, waxaana soo qaban-qaabiyey maamulka gobalka Banaadir, iyadoo ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee Bulshada, waxayna ddku intooda badan siteen fanaanado ay ku qornaayeen ha hir galo shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed.
Banaanbaxaan ayaa waxaa ugu horey ka hadlay guddoomiyaha Gobalka Banaadir Max�ed Dheere oo sheegay in banaanbaxaani uu ka tarjumayo rabitaanka qaran Soomaaliyeed, isagoo sheegay in gobalka Banaadir uu ku soo dhaweynayo ergooyinka ka yimid gobalada dalka si loo muujinayo dib u heshisiin dhab ah.
Max�ed Dheere waxa uu u soo jeediyey kooxaha wax tuuraya in ay ka soo qaybgalaan shirkaan oo waxay tabanayaan halkaan ka soo jeediyan.
Shirkaas waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha shirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaliyeed Cali Mahdi Max�ed oo sheegay in shirka uu haatan ku socdo sidii loogu talagalay, beeluhuna ay xalinayaan wixii khilafaad ah ee horey u dhex maray.
Cali Mahdi waxa uu sheegay in banaanbaxaani uu beeninayo wararkii maalmahan la faafinayey ee ahaa in shirka dib u heshisiinta loo dhameyn ama ay koox gaar ah wadato.
Siminaar ay ka faa'iideysanayeen 54 xubnood oo ka kala socda sideed gobol oo ka mid ah Gobolada Koofureed ee Soomaaliya uu soo qabanqaabiyey Mac-hadka Nolosha iyo Nabada islamarkaana uu Maalgeliyey isla Mac-hadka Goobjoogna ay ka ahayd Wasaarada Haweenka Horumainta Qoyska iyo Caruunta, ayna fulineysay Dalada Haweenka iyo Horumarinta Gobolka Baay, oo socdey mudo 3 maalmood ayaa lgu soo gebagebeeyey Hoolka shirarka Caalin Center ee Gobolka Baay.
Siminaarkan oo ay u jeedadiisu ahayd kor u qaadida doorka Haweenka arimaha nabadeynta iyo Dibu-heshiisiinta, Sare u qaadida aqoonta Haweenka xalinta khilaafaadka, iyo sidii ay u sameysan lahaayeen Gudi Haween oo iska xira Haweenka Soomaalida ayaa mudadii uu socdey waxaa casharo ka bixineyey Madaxa Mac-hadka Nolosha iyo Nabada Md, Cabdi Aadan Cali (Cabdi Dheere) iyo Maxamed Xasan Biixi ayna fududeeyayaal ka ahaayeen qaar ka mid ah Dalada Haweenka Gobolka Baay.
Agaasimaha Guud ee Wasaarada haweenka Marwo Jamiilo oo gebagebadii ka hadashey xiritaankii Siminaarka ayaa waxay tiri "Xuquuqda Haweenka ma aha mid codsi, laakiin waa mid qasab oo waajib ah, sidoo kale waxay keloo sheegtey in Haweenka qaybahaooda kala duwan ay la soo xiriiri karaan Wasaarada, gaar ahaan Haweenka Saxaafada ku jira ayna dooneyso inay isla shaqeeyaan sidii hawlaha haweenka kor loogu qaadi".
Gunaanadkii siminaarka ayaa waxaa laga soo saarey Baaq, Taageero Shirka Dibu- heshiisiint iyo waxaa lagu doortey Sideed xubnood oo ka kala socdey Baay, Banaadir, Bakool, Labada Shabeelle, labada jubba iyo Geddo, xubnihii loo doortey ayaa waxaa ka mid ahaa Safiyo Abukar Karaani (Banaadir), Xaliimo Cabdi Abiyow (J, dhexe), Caasho Abuukar Cismaan(Sh, hoose), Maryan Sheekh Cabdi (Sh, Dhexe), Maano Huudow Cismaan(Baay), Xaliimo Faarax Godane(J,hoose), Nimco Isaaq Maxamed (Bakool), Batuulo Ibraahim Xasan (Geddo).
Xubnahaan la doortey ayaa waxay la shaqeyndoonaan Wasaarada Haweenka DFKMG, Haweenka Baarlamaanka FKMG iyo Ururada Haweenka ee Bulshada Rayidka Soomaaliyeed, waxayna Hawshaan gudan doonaann mudo Halsano ah.
Madaxa Mac-hadka Nolosha iyo Nabada Md, Cabdi Dheere oo aan su'aaloo kooban aan ka weydiiyey ayaa sheegey ayaa wuxuu yiri "kuma koobnaandoono intaan oo keli ah balse, xubnahaan la doortey maadaama aanu aasaaska Gudiga Isku xirka Haweenka Soomaaliyeed aanu wax ka lahayn, si ay wax tar u noqdaan, Ujeedadeenuna waa kor u qaadida doorka Haweenka Soomaaliyeed xaga Nabada iyo Wacyigelinta, waxaana inoo qorsheysan inaan Gobolada kale sida Puntland, Gaalkacyo, Galgaduud iy Baladweyne aan u qabano Siminaar noocaan oo kale.
Maxamed Macallin Cismaan(All-man) Somalitalk Baydhabo
Faafin: SomaliTalk.com | July 24, 2007
Itoobiya oo ka soo horjeeda in xilka laga qaado Ra’isul Wasaaraha DFKMG Geedi
.Soomaali farabadan oo ka soo barkacay Soonka Shanaad..
.Qaraxyo weli ka sii socda Magalada Muqdisho...
.Asmara oo martigelineysa kulan ay ka soo qaybgalayaan 700
Wararka oo dhan hakan ka akhri... July 24
WARBIXIN:- SHIRAR KA DHACAY MAGAALADA CEELBUH OO LAGAGA HADLAY ARIMAHA DEGAANKA.
Boqorkii hore ee Afgaanistaan oo geeriyooday
Jaaliyada PL ee Minnesota oo ergay udirtay Puntland
Jaaliyadda Ogaadeeniya ee K/Africa oo Banaanbaxey Tacadiyadda Laguhayo Shacabka Soomaalidda Kililka 5aad Akhri
Munaasabadda Maalinta Xuquuqda Aadamiga Soomaaliyeed, 22 July 2007 - oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa looga hadlay.... Akhri... July 23